အဝါရောင်နှင့်ရေတပ်အပြာရောင်ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုအမျိုးသားဘောလုံးကစားသမား Marcel Tisserand မှအပြောင်းအရွှေ့သည်သူသည်အဝါရောင်အသင်းသို့ရောက်ရှိလာခြင်းကိုပျော်ရွှင်ပြီးချန်ပီယံကိုပါ ၀ င်ချင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျာမနီရဲ့ Wolfsburg အသင်းကပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်လူငယ်နောက်ခံလူFenerbahçe Can Bartu ဌာနရှိစာနယ်ဇင်းသမားများကိုဒီအဝါရောင် – အပြာအပြာအသင်းနှင့်ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးနောက်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Tisserand, Fenerbahçeသို့ပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်းအပေါ်သူ၏ကျေနပ်အားရမှုကိုဖော်ပြခြင်း “ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအလှူငွေပေးချင်ပါတယ်။ သူဟာFenerbahçeလိုကြီးမားတဲ့ကလပ်ကနေကမ်းလှမ်းမှုကိုရတဲ့အခါသူ့ကိုငြင်းပယ်ရန်ခက်ခဲသည်။ Fenerbahçeသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကလပ်အသင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူဒီကိုယူလာပြီးအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ် “ ။
သူသည်အသင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အချိန်လိုအပ်သည်ကိုအလေးအနက် ထား၍၊ Marcel Tisserand ဂရိတ်ကစားသမားများFenerbahçeကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏လမ်းစဉ်တွင်တိုးတက်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အတွဲများဖြင့်တိုက်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ဘောလုံးနှင့်အတူသွားကစားလိုသောကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါဘောလုံးကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါအသင်းကိုကူညီချင်တယ်။ ။
တူရကီရှိဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုကစားသမားများကိုလွှဲပြောင်းပေးသည့်အမြင်ဖြင့်ကစားသမားများစွာ ၀ တ်ဆင်ထားသောယူနီဖောင်းတွင်အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ငန်းစဉ် “အန်လိုကာ၏ကြီးမားသောပန်ကာ။ နစakနှင့်ငါစကားပြောခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများစွာနှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ ဤနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းပြောစရာစကားကောင်းများရှိသည်။ ကျနော်တို့က Luyindama နဲ့အတူ National team မှာကစားတယ်။ ဒီမှာငါပြိုင်ဘက်ပါ။ လူတိုင်းကသူတို့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြမှာပေါ့။ ငါတို့ကကွင်းပြင်မှာပြိုင်ဘက်တွေပဲ။
Marcel Tisserand သည်သူ၏ပထမဆုံးလေ့ကျင့်မှုမတိုင်မီလယ်ကွင်း၌သူ၏အသင်းဖော်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာကကြိုဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရန်အသင့်ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ချန်ပီယံအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူပြောခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးတွင် Tisserand ကသူသည်စူပါလိဂ်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးသူသည်စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင်တာ ၀ န်ရှိလျှင် Galatasaray နှင့်ဒါဘီတွင်ကစားလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
BETPAS423 İŞTE FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ! SUPERTOTOBET0120 İŞTE FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ! RESTBET501 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ RESTBET501 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ RESTBET501 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ RESTBET501 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” RESTBET501 BEŞİKTAŞ’TAN ‘KARANTİNA SÜRESİ’ TALEBİ! RESTBET501 BALOTELLİ BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI SUPERBAHİS483 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ BETBOO868 İŞTE KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ VE GERÇEKLEŞECEĞİ NOKTA!
16 Comments on RESTBET501 İŞTE FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ!
ÜMİT November 24, 2020 at 3:40 pm
İRFAN November 24, 2020 at 6:50 pm
restbet canlı casino restbet oynatan var mı
TANER November 24, 2020 at 8:00 pm
restbet canlı casino herden iletişim var ulaşabilirim ödemelerim kaldı
AHMET November 25, 2020 at 9:40 am
restbet bonus güvne analizi nasi ki üye olsak mi? alanında başarılı olan site önerin
ALİ BURÇ November 25, 2020 at 11:00 pm
SERÇİN November 26, 2020 at 1:40 am
TUĞBA November 26, 2020 at 3:10 pm
CİHAN November 26, 2020 at 9:20 pm
restbet canlı izle ödememi alamadım
ABİDİN November 26, 2020 at 11:50 pm
AHMET November 29, 2020 at 11:40 am
OLGU November 30, 2020 at 2:00 am
OTAĞ November 30, 2020 at 7:50 pm
ZARİFE December 1, 2020 at 12:50 pm
KAMERCAN December 4, 2020 at 6:30 pm
BİRKAN December 6, 2020 at 2:00 am
EMRE December 7, 2020 at 10:40 pm